Namni Galaanaan Nyaatame Hoomacha Qaqqabata – Kutaa 1 |
Qixxeessaa Lammii irraa | Onkoloolessa 05, 2017
Jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti bu’aa bahii heddutu jira. Kan akeeka, kaayyoo, obsaa fi cichoomina qabutu jireenya mataa isaa moohata. Kan waan jedhame kana guutatee hin argamne yeroo kamuu komataa, ajiifataa fi tuffataa ta’ee hafa. Waa uumee of hujoomsuu waan hin dandeenyeef hojii nama biraatti hin quufu. Yeroo hedduu dhimma laafinaa irratti malee dhima jabinaa tasa dubbachuu hin danda’u. Ijoon dubbii barruu kiyyaa ifaadha. Dhimma QBO ABOn hoogganamtu irratti dikee namoota gara garaan sab-himaalee alagaa fi kanneen biroo irratti darbamaa jiru irratti waa jechuu barbaadeeti.
ABOn dhaaba Oromoo ta’uun hin haalamu. Hoogganni isaas alagaa miti. Dhaaba tokkicha kana akka dhaaba hedduutti dhiheessuuf yaaluu dura isa kamitu ABO dhugaa akka ta’e adda baafachuu barbaachisa. Kun amoo, jibbansaa fi jaalala irratti hundaawanii osoo hin tahin dhugaa irratti hundaawuudhaan ta’uu qaba. ABOn tokkicha malee lamaa fi sadi miti. Wal diddaalee gara garaa dhaaba keessatti dhalate irraa fedhii gara garaatiin namoota dhaaba irraa bahanii ABO ofiin jedhan maraan afaan guutatanii akka dhaabaatti ilaaluun dogongora. Dhugaa dubbatanii dhiifaaf farda yaabbachuu woyya. ABOn bakka ofii jira. Dhibdeelaa gara garaa isa mudate irraa hooggana isaa irratti komii fi balaaleffatnaan hammana hin jedhamne firaa fi farreen gara garaatiin irratti deemamaa turus dhaaba dhugaa irratti utubame waan ta’eef inni eddoma isaa jira.
Dhalli Oromoo dhaaba kana hin jaalatne hin jiru. Yoo komate malee jibbuu hin danda’u. Ilaalcha siyaasaatiin kan isa jibbu yoo jiraate miseensota OPDO qofa. ABOn har’a isaaniinis hin jibbu. Duraanis sababa kittillayyoo TPLF ta’aniif malee Oromummaa isaanii hin haalle. Har’a bal’inaanuu qabsoo bilisummaa sabichaa waliin qindeeffatee geggeessaa jira. Namootni miseensota dhaaba kanaa turan jiila duraan qaban irraa kan har’allee abdii ofitti dhabu irraa tas-gabbii of dhoorganii hooggana dhaaba kanaa irratti kosii darbachaa jiran ni jiru.
Isaan kun eenyu? Jedhamanii ilaalamuu qabu. Gariin isaanii warra kaayyoon Mallas samuu isaaniitti maxxanee hafe. Gariin ammoo warra sirna bulchiinsa Mallas keessatti ummata Oromoo maqaa ABOn lafaa xuruuraa turan kan boru itti gaafatama seenaa jalaa bahuu akka hin dadeenye beekantu dhaaba kana lafetti jibba. Inni biraa ammoo namoota akka dhuunfaatti hoogganoota dhaaba kanaa irraa quurrama gara garaa qabantu hooggana dhaaba kanaa xuriin qabachuuf carraaqa. Keessumaa hoji dhabdoota olola hojii godhatan kan walaboomuu Oromiyaa fi bilisoomuu Oromoo irraa soda qabantu hooggana dhaaba kanaa irratti haakkifata.
Dhuguma dhalli Oromoo dhimma Oromomoof quuqama qabu dhaaba saba isaa hin xureessu. Sab-himaalee alagootaa irratti bahee maqaa hin balleessu, laafina mul’atu dhabamsiisuuf carraaqa malee kofa ofii ol qabee nyaphatti hin garsiisu. ABOn olola nama tokkeef ho’aa hin ta’u. Diinni hinikkaatuu homaa irraa buusuu dadhabee jira. Rakkoo keessa ofii diinatti baasanii himachuun ammoo doofummaadha. Yeroo ummatni keenya tokkoomee sibiila ta’e kanatti dhimma dhuunfaa kaasanii gosaa fi qubsumaan ummata kana adda baasuuf yaaluun kun dhuguma qabsaawumaadhaa? Kana namoota miidiyaa Abashaa irratti dhihaatanii hameenya ABO babal’isaa warra jiraniif jedhe. ABOn akka ummatni isaa barbaadutti deema malee akka namootni dhuunfaa barbaadanitti akka hin deemne hubatamuu qaba.
Ogummaa qabaniin dhaaba kanatti dabalamanii dhaaba kana jabeessuun fafooma hin qabu. Fafooma kan qabu kaayyoo dhaabichaa micciiruudhaaf hojjachuudha. Dhaaba kana deddeebi’ee kan mudate isa kana. Kayyoon dhaaba kanaa ifaadha. Walabumaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoti! Ilaalchi namoota dhaaba kana keessaa bahanii hoogganoota dhaaba kanaa irratti ololan garuu kaayyoo kanaan addaa qaban. Gariin hoogganummaa gandummaa kajeelu; gariin dhaaba kana Itiyophiyummaan cuuphuu barbaadu; gariin ammoo dhaaba kana dhaaba amantii tokkicha qofaaf dhaabbatu godhuu barbaadu; kanneen biraa ammoo, gonkumaa dhaaba kana balleessanii ummatni Oromoo akka gabrummaan jiraatu barbaadu. Kanaaf, yaa dhala Oromoo mee warra hojii hin qabne carraa argame mara irratti midiyaalee gara garaa irratti bahee hooggana dhaaba kanaa maqaa yakku mee jala bu’aa qoradha.
Hoogganni kun gosaan, qubsumaan, ilaalchaa fi dandeettiin nama qooda ololli jedhu dhara. Namootni har’a hooggana kana irraa hammeenya himan warra hooggana kanaaf miinoo lubbu balleessii kahanii imaamatni isaanii harkaa fashallaan tattaaffii hooggana dhaabaa lubbuu baleessuuf godhan kana dhokfachuuf ololaan qilleensa irratti bahan. Kan silaa qotiyyoon iyyitu qacceen iyyiti wanti jedheef kanaaf. Balaa miseensota dhaabaa fi hoogganoota dhaaba kanaa irratti namoota har’a dhara waccabbaran kanaan aggaamatamee turame dhaabni ummata isaaf ifa gochuu dhiisee of biratti qabuun bilchina malee dhabiinsaa miti. Gara bal’inaa fi fageessanii waa ilaaluu irraahi malee sodaachuu fi qaanfachuus miti.
Yaa ilmaan Oromoo namoota dhugaa jiru dhoksanii dhara dhugaa fakkeessanii olola dharaan gurra nama duuchuu barbaadan kanneen mee gurra qaraan, qalbii tasgabbiin of irraa eegaa. Jallataan nama jallisuuf waan hin yaalle hin qabuu quba qabaadhaa. Bakka dhugaan hin jirre dharti itti hin qoxxiftuu beeka. Yeroo hedduu ABO Shanee/Dawid ykn Shabiyaa jedhanii dhaabni abaaran kun osoo waa harkaa qabaatuu baatee tufiifuu waa silaa maqaa isaa hin dhahan. Waan tuffatan ittuma dhisanii waan ofii danda’an godhan. Waan jaalatte bitachuuf akka gatiin gadi isii bu’uuf gabayaan arrabsiti. Warri dhugatti dhiiga Oromoo ta’an yoo hinaaffaaf dhaaba kana kan balaaleffatan ta’e dhaabichi dhuguma kan isaaniitii dhaaba kanatti deebi’anii jabeessuu qabu. Godni abbaa keessa jiruuf ifa waan ta’eef laafinaa fi jabina dhaaba keessaniis yoo keessa jiraattan irraa dubbachuu dandeettuu dhaaba keessanitti ariitiin dacha’a.
Warri gosummaa leellisuu barbaadu ammoo, Oromoon wal hin caalu. Laafatee fi jabaates kan walii isaati. Gabrummaa fi bilisummas waliin qaba! Qubsumni, amantiin, gosummaan, loqodnii fi ilaalchi Oromoo walitti hin diinomsu. Farreen qaphxiilee kana madda garaa garummaa godhatanii tokkummaa ummata keenyaa laaffisuuf carraaqan itti gaafatama seenaa fi seeraa jalaa bahuu akka hin dandeenye beekuu qabu. Namoota dhimmi kun isaan ilaallatu kan haasofni isaanii yoomiyyuu dhageetiif hin tolle osoo itti hin dhihin akka manatti galan jedha. Warri yakka qaban dhokfachuuf hooggana dhaabaa xuriiin qaqqabachuuf yaalanis nama galaanni badii fudhatee hoomacha qabachuuf yaalaa jiran ta’uu isaanii of hubatanii olola isaanii kana yoo dhaaban bareeda jedha.
Yaada kiyya hin fixanne, itti fufa. Har’aaf kanumaan nagayatti!